Ogaden News Agency (ONA) – Wafti Ree Yurub Ah oo Lakulmay Wasiirka Gaashandhiga Somaliya.
Wafti Ree Yurub Ah oo Lakulmay Wasiirka Gaashandhiga Somaliya.
Wasiirka Gaashaandhiga ee xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa qaabilay saraakiil ka socotay Midowga Yurub.
Wasiirka iyo saraakiishan ree Yurub ayaa kawada hadlay sidii loo xoojin lahaa gaashaandhiga Soomaaliya. Wafdiga ayaa sheegay in Midowga Yurub uu ka qayb qaadanayo dib u dhiska iyo tayeeynta ciidammada Soomaaliya.
Waxay tilmaameen in ururku xoojinayo taageerada uu siiyo Dawladda Federalka Soomaaliya iyo shacbigeeda. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, General Cabdulqaadir Sh Cali Diini ayaa isaguna sheegay in Dawladda Soomaaliya ay xoojinayso ciidammadeeda qalabka sida, si ay u hantaan difaaca dalkooda hooyo.
Saraakiishan kulanka la qaatay Wasiirka iyo mas’uuliyiinta kale ee Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa ahaa kuwa ka socday dalalka Spain, Sweden, Talyaaniga iyo saraakiil kale, waxaana ay u yimaadeen inay wax ka ogaadaan qaabka ay u shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka oo tababar ka hela Midowga Yurub.